Odayaasha iyo wax-garadka Buurtinle iyo Qorilay oo ku guulaystay xakamaynta xiisad Cagaare ka soo cusboonaatay. – Radio Daljir
Cagaare, May 27- Waxgaradka iyo odayaasha deegaanadda Buurtinle iyo Qoriley ee gobolladda Nugaal iyo Sool ayaa si hor dhac ah ugu guulaystey xakamaynta xiisad colaadeed oo dhul daaqsimeedka deegaanadaasi kasoo cusboonaatay todobaadkan gudihiisa. deegaannadaasi oo horay iska-hor-imaaddo ugu dhexmareen beelo walaalaha ah.
Xiisadda xilligan ka cusboonaatay deegaannadaasi ayaa timid kadib markii todobaadkan gudihiisa halka lagu magacaabo Baliya-korshe lagu diley nin reer miyi ah oo halkaasi kusugnaa, waxaana markii shilkaasi dhacay curtay dareen saan-saan colaadeed wata inkastoo waxgaradka labada beelood ee xurguftu dhexmartay ay isu taageen xakamaynta amuurtaasi.
Caaqil Maxamuud Axmed Yaasiin oo kamid ah cuqaasha tuulada Qoriley ee gobolka Sool oo la hadlay idaacada Daljir ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda hadda tahay mid xasiloon islamarkaana ay gacanta ku qabteen odayaasha iyo waxgaradka labada dhinac.
Sidoo kale caaqilku, waxaa uu sheegay in waxgaradka labada dhinac ay xidhiidh xooggan iyo wada-shaqayn joogto ah kasameeyeen xakamynta arrintaasi, waxaana uu tilmaamay in la isku fahmey wax-ka-qabad dhacdada soo cusboonaysiiyey xurgufihii laga tallaabsaday.
Caaqilka ayaa sheegay in dhacdada u danbeysey ay sababeen dad wax-magarato ah waxaana uu tilmaamay in ay hagar-daamo ku tahay heshiiskii hore uga dhacay deegaanka Magaagley ee ay gadhwadeenka ka ahayd dawladda Ethiopia kaasi oo uu sheegay in fulintiisa dib u dhac ku yimid.
Ugu danbayn caaqilka ayaa ugu baaqay labada beelood ee Walaalaha ah inay ka waayo-arkaan colaadda iyo isdilka, waxaana caaqilku uu ku baaqay in nin dhintay aan nin kale laga daba geyn loona baahan yahay in dadka nool laga taliyo ayaahooda.
Si kastaba ha ahaateee xiisadda-colaadeedka labadan beelood ee walaalaha ah ka dhax-taagan ayaa ah mid soo noq-noqtay muddooyin kala duwan, waxaana dhibaatooyinkani soo taxnaayeen illaa 2007-dii iyadoo ay burbureen heshiisyo dhawr ah oo lagu xallinayey xurgufta Cagaare.